Waaliga Dhoobleey “Shacabka waxaan u sheegaynaa in Gaandi uu yahay Gaal Naag Faransiis ah qaba, Axmed Madoobe-na kama ag dheera isaga ayuu heshiis lagalay waana ku Jihaadaynaa | Halganka Online
Waaliga Dhoobleey “Shacabka waxaan u sheegaynaa in Gaandi uu yahay Gaal Naag Faransiis ah qaba, Axmed Madoobe-na kama ag dheera isaga ayuu heshiis lagalay waana ku Jihaadaynaa
Wilaayada Islaamiga Dhoobleey ayaa shalay meel fagaara ah kala hadashay shacabka Gobalada Jubbooyinka si ay uga warbixiso dhaq dhaqaaqyo maalmihii la soo dhaafay ka socday gudaha dalka Kenya.
Boqolaal qof ayaa shalay isugu soo baxay fagaaraha magaalada Dhoobleey si ay u dhagaystaan khudbado ay jeedinayeen Mas’uuliyiinta Wilaayada Islaamiga ah oo khudbadooda siweyn loo sugayay.
Waaliga degmada Dhoobleey Sheykh Max’med Maxamuud Xaaji Abuu Sacda ayaa shaaca ka qaaday in Wilaayada Islaamiga Dhoobleey oo kaashanaysa ALLAAH ka dibna dadka deegaanka ay Jilibka u laabi doonaan duulaan kasta oo uga yimaada dhanka Kenya iyo Maleeshiyaadka Kenya lagu soo Tababaray.
Abuu Sacda ayaa shacabka Dhoobley uga mahad celiyey dhaqaale iyo hub ay ugu deeqeen Jihaadka Soomaaliya wuxuuna balan qaaday in Xoogaga Mujaahidiinta ah ay si adag isaga difaaci doonaan duulaanka soo socda.
Mas’uulkan ka tirsan Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa markii ugu horaysay reer Dhoobleey u sheegay in Axmed Madoobe iyo Wasiiro DKMG ah ka tirsan oo Kenya ku sugan ay Riddoobeen.
Waxaan idiin sheegayaa in Gaandi uu gaaloobay wuxuu qabaa naag Faransiis ah oo Masiixiyad ah hada wuxuu heshiis lagalay Axmed Madoobe oo aad ogtihiin sida uu Diinta alle u khiyaameeyeen dadkaas marnaba nama soo galaan Gaalo iyo Muslimiin ayaan kala nahay waana la Jihaadaynaa” ayuu yiri Abuu Sacda.
Odayaal kasoo jeeda Jubbooyinka oo iyana goobta ka hadlay ayaa sheegay in aysan wax xariir caqiidda ah wadaagin ayaga iyo Gaandi iyo Axmed Madoobe mar hadii ay la soo safteen cadawga Kenya taas oo meesha ka saaraysay sheegashadii Axmed madoobe ee ahayd in uu Jabooyinka weerarayo isagoo qabiil difaaci.
Beelaha degan gobalada Jubbooyinka ayaa wado Tartan ay wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ugu aruurinayaan Ciidan iyo dhaqaale si looga hortago duulaanka Kenya kasoo socda.
Dad badan oo markii hore ku jiha warteersanaa dagaalkii Axmed Madoobe lala galay ayaa baraarugay markii uu Axmed Madoobe Heshiis lagalay Dowladda KMG ah iyo Kenya taas oo keentay Dabayllo nacayb ah oo uu Axmed madoobe ka kasbada shacabka Jubbooyinka.
« Shariif Xasan oo Xildhibaanada Beeshiisa ku kiciyey Aadan Madoobe iyo khilaafkii xukuumada ridada oo sii xoogaystay. Qaraxyo waaweyn oo geystay dhimasho iyo dhaawac badan shacab muslimiin oo ka dhacay masjidka ku yaala gudaha suuqa bakaaraha magaalada muqdisho »